कसले कहाँ लग्यो टेलिकमको २० लाखका रिचार्ज कार्ड ? - Everest Dainik - News from Nepal
कसले कहाँ लग्यो टेलिकमको २० लाखका रिचार्ज कार्ड ?
काठमाडौँ, माघ १५ । नेपाल टेलिकमको १ सय रुपैयाँ दरका २० हजार थान रिचार्ज कार्ड हराएका छन् । आयातका क्रममा २० हजार थन रिचार्ज कार्ड हराएको टेलिकमले जनाएको छ । तर उक्त कार्ड कसले कसरी हराए भन्ने बारेमा टेलिकमले केही बताएको छैन ।
याे पनि पढ्नुस अब ११२ लाई एउटै इमर्जेन्सी नम्बर बनाउने
टेलिकमले एक सूचना जारी गर्दै आफ्ना एनटी रिचार्ज कार्ड हराएको जनाएको छ । सिरियल नम्वर १११६१०००८१६००००१ देखि १११६१०००८१६२०००० सम्मको रिचार्ज कार्ड हराएको हो ।
यि सिरियल नम्बरका रिचार्ज कार्ड खरिद विक्री नगर्न टेलिकमले आह्वान गरेको छ । यसबाट ग्राहकबर्गमा समस्या पर्न सक्ने भएकाले टेलिकमले सचेत रहन भनेको छ ।
याे पनि पढ्नुस नेपाल टेलिकममा राेजगारीकाे अवशर !!!
यि रिचार्ज कार्ड बजारमा आए भनेपनि प्रयोग गर्न नसकिने टेलिकमले जनाएको छ ।
ट्याग्स: nepal telicom